တာဝန်သိလောင်းကစား - Poundslots ကာစီနို
PoundSlots.com သည်တာ ၀ န်ရှိသောကစားနည်းများနှင့်အသက်မပြည့်သေးသောလူငယ်များနှင့်လောင်းကစားခြင်းကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေရန်တာ ၀ န်ယူထားခြင်းများအတွက်ရည်ရွယ်သည်။
PoundSlots.com တွင်သင်၏ဂိမ်းအလေ့အထများကိုသင်စိတ်ပူမိလျှင်သို့မဟုတ်ခေတ္တရပ်တန့်ရန်အချိန်တန်သည်ဟုထင်လျှင်၊ customersupport@instantgamesupport.com ရေတိုသို့မဟုတ်ရေရှည်အတွက်မိမိကိုယ်ကိုဖယ်ထုတ်ထားသည့်ကာလကိုထုတ်ပေးရန်။
PoundSlots.com တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကစားသောဂိမ်းများသည်အွန်လိုင်းဖျော်ဖြေရေးပုံစံတစ်ခုသာဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်ထားကြောင်းမှတ်မိရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့တိုက်တွန်းလိုပါသည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်အချို့သောကစားသမားများသည်ဤဂိမ်းအမျိုးအစားများကိုစွဲလမ်းရန်စိတ်သဘောထားရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှသိသိသာသာဆုံးရှုံးမှုများစုဆောင်းမိနိုင်သည်။
အွန်လိုင်းဂိမ်းများသည်အခွင့်အရေးပေါ်အခြေခံသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင်သင်အနိုင်ရရှိမည်ဟုကတိပေးမည့်အာမခံထားသည့်နည်းဗျူဟာများသို့မဟုတ်နည်းလမ်းများမရှိပါ။
သင်၏ဆုံးရှုံးမှုများကို 'လိုက်ဖမ်း' ရန်ကြိုးစားခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ပါ။ သင်၏ဆုံးရှုံးမှုများကိုယခင်ကပြန်လည်ရယူရန်မျှော်လင့်ချက်၌ငွေပိုမိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်နောက်ထပ်ရန်ပုံငွေများဆုံးရှုံးနိုင်သည်။
သင်၏အွန်လိုင်းဂိမ်းသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဘဝနှင့်သူတစ်ပါးအပေါ်ထားရှိရမည့်တာဝန်ဝတ္တရားများသို့ရောက်နေလျှင်လောင်းကစားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြaနာရှိနိုင်သည်။ သင်၏လောင်းကစားခြင်းလုပ်ငန်းများကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပြီးဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုကိုစဉ်းစားပါ။
PoundSlots.com သည်သင်မှတ်ပုံတင်သည့်အခါနေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ်နှင့်လစဉ်ကန့်သတ်ပမာဏကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ ငွေပမာဏတွင်သင်စုဆောင်းရန်ဆန္ဒရှိသောသိုက်များ၊ လောင်းကြေးများနှင့်ဆုံးရှုံးမှုများပါ ၀ င်သည်။ သင်ကန့်သတ်ချက်များကိုနောက်မှလုပ်လိုသောပြောင်းလဲမှုသည်သင်တောင်းဆိုပြီး ၇ ရက်အလိုတွင်အကျိုးသက်ရောက်ပါလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်သင်မည်မျှကြာကြာကစားသည်ကိုအချိန်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ သင်၏ကန့်သတ်ချက်များကိုပြောင်းလဲရန်သင်သည် "အကောင့်" သို့သွားနိုင်သည်။
သင်၏အချိန်ကုန်ကိုသင်၏တာဝန်ရှိဂိမ်းကစားခြင်းချိန်ညှိချက်များတွင် ၄၂ ရက်အထိသတ်မှတ်နိုင်သည်။ (သို့) သင်၏တောင်းဆိုမှုကိုကျွန်ုပ်တို့၏အီးမေးလ်မှတဆင့်အီးမေးလ်ဖြင့်ပေးပို့နိုင်သည် (customersupport@instantgamesupport.com).
သင်သည် ၀ န်ဆောင်မှုများအသုံးပြုခြင်းကိုအတိအကျ (သို့) အကန့်အသတ်မရှိအချိန်မှီဖယ်ထုတ်နိုင်သည် (သို့မဟုတ်၊ အကယ်၍ သင်၏အကောင့်သည်ကုမ္ပဏီ၏လောင်းကစားကော်မရှင်၏အွန်လိုင်းလောင်းကစားလိုင်စင်ဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားလျှင် - အနည်းဆုံးခြောက်လမှ ၁၂ လအထိ (သင်အားဖြင့်တိုးချဲ့နိုင်သည်) သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးခြောက်လတစ်ခုချင်းစီ၏အနည်းဆုံးအချိန်ကာလ) ကို client မျက်နှာပြင်ရှိတာဝန်ရှိသည့်ကစားနည်းကဏ္sectionမှတဆင့် (သို့) ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အထောက်အပံ့ကို ဆက်သွယ်၍ (customersupport@instantgamesupport.com), သင်၏ကုမ္ပဏီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အညီ။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဖယ်ထုတ်ခြင်းတောင်းဆိုချက်ကိုအတည်မပြုမီသင့်ကိုသင်ဖယ်ထုတ်ခြင်း၏အကျိုးဆက်များနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုသင့်အားပေးလိမ့်မည်။ သင်ကကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖယ်ထုတ်ရန်ဆုံးဖြတ်လျှင်၊ သင့်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်ဖယ်ထုတ်ခြင်းအားလက်ရှိသင်အသုံးပြုသောဝေးလံသောလောင်းကစားဝိုင်းအော်ပရေတာများသို့တိုးချဲ့ရန်စဉ်းစားရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့တိုက်တွန်းပါသည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဖယ်ထုတ်ခြင်းပြုလုပ်သည့်အချိန်တွင်မဆုံးဖြတ်ရသေးသောအလောင်းအစားများကိုပုံမှန်အချိန်အတိုင်းအတာများနှင့်နောက်ဆက်တွဲသက်ဆိုင်ပါကသင့်အားပေးချေသောငွေပမာဏများအရပုံမှန်နည်းလမ်းအတိုင်းဖြေရှင်းမည်။ မိမိကိုယ်ကိုဖယ်ထုတ်ထားသည့်အကောင့်လုပ်ကွက်များကိုသဘောတူထားသည့်ကိုယ်ပိုင်ဖယ်ထုတ်ခြင်းကာလအတွင်းဖျက်သိမ်း။ မရပါ။
အကယ်၍ သင်သည်မိမိကိုယ်ကိုဖယ်ထုတ်ရန်စဉ်းစားနေပါက GAMSTOP တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်လိုလိမ့်မည်။ GAMSTOP သည်အခမဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်သည်ဂရိတ်ဗြိတိန်တွင်လိုင်စင်ရအွန်လိုင်းလောင်းကစားကုမ္ပဏီများမှသင့်ကိုဖယ်ထုတ်နိုင်သည်။ ပိုမိုသိရှိရန်နှင့် GAMSTOP နှင့်ဆက်သွယ်ရန် ကျေးဇူးပြု၍ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ www.gamstop.co.uk .
တာဝန်ရှိသည့်ဂိမ်းမျက်နှာပြင်မှတဆင့်အမှန်တကယ်စစ်ဆေးသည့်အချိန်အပိုင်းအခြားကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ သတ်မှတ်ပြီးသည်နှင့်သင်သည်ဂိမ်းများကိုတူညီသော session တစ်ခုအတွင်း၌စတင်ကစားသည့်အချိန်ကုန်လွန်သွားပြီးဖြစ်သည် ("Timecount") ။ Timecount သည်သင်သတ်မှတ်ထားသည့်အမှန်တကယ်စစ်ဆေးသည့်အချိန်အပိုင်းအခြားသို့ရောက်ရှိသွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်ကစားပွဲများဆက်လက်ကစားလိုကြောင်းအသိအမှတ်ပြုသည်အထိတူညီသော session တစ်ခုအတွင်း၌ပင်ဂိမ်းများကိုဆက်လက်ကစားခြင်းမှတားဆီးလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဂိမ်းများကိုဆက်ကစားလိုကြောင်းအသိအမှတ်ပြုပါက Timecount သည်နောက်ထပ်အဖြစ်မှန်စစ်ဆေးမှုကိုပြန်လည်မပြီးမချင်းထိုအထက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်သည်ပြန်လည်စတင်လိမ့်မည်။ session အသစ်တစ်ခုကိုစတင်ခြင်းသည် Timecount ကိုလည်း reset ဖြစ်စေလိမ့်မည်။ အချိန်မရွေးသင်အမှန်တကယ်စစ်ဆေးသည့်အချိန်အပိုင်းအခြားကို ပြောင်းလဲ၍ ဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။ ထိုသို့ပြောင်းလဲခြင်း (သို့) ဖျက်သိမ်းခြင်းသည်ချက်ချင်းစတင်ဝင်ရောက်လိမ့်မည် (အပြောင်းအလဲဖြစ်လျှင် - Timecount ကိုပြန်လည်သတ်မှတ်မည်) ။
ဂိမ်းဆိုဒ်များကို ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုတားဆီးရန်အရေးကြီးသောကိရိယာတစ်ခုမှာအင်တာနက်စစ်ထုတ်ခြင်းဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) ဖြစ်သည်။ သင်၏အိမ်ရှိအသုံးပြုသူများအားဂိမ်းကစားခြင်းကိုတားမြစ်လိုပါကအောက်ဖော်ပြပါပရိုဂရမ်များထဲမှတစ်ခုကိုစမ်းကြည့်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်အွန်လိုင်းလောင်းကစားခြင်းအတွက်ဖြစ်ကြောင်းကြေငြာရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်စာမျက်နှာများတွင် PICS နှင့် ICRA တံဆိပ်များကိုပြသသည်။ အင်တာနက်စစ်ထုတ်စက်များသည်ဤတံဆိပ်များပေါ်တွင်ကောက်ယူ။ သင်၏ကွန်ရက်ရှိအသုံးပြုသူများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များထဲသို့ဝင်ရောက်ခြင်းကိုထိရောက်စွာတားဆီးနိုင်သည်။ Microsoft ၏အင်တာနက်အကြောင်းအရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်သည်ဤတံဆိပ်များကိုဖတ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ကျေးဇူးပြု။ သွားရောက်ကြည့်ရှုပါ https://www.fosi.org/icra.
ဆိုက်ဘာကင်းလှည့် - https://www.cyberpatrol.com
ကျွန်ုပ်တို့၏ကစားသမားအားလုံးသည်တရားဝင်အသက်အရွယ်ဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်သင့်လျော်သောအသက်စစ်ဆေးမှုစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်သည်။ အကယ်၍ ကစားသမား၏သက်တမ်းကိုကျွန်ုပ်တို့အတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ သင်တရားဝင်အသက်အရွယ်ရှိကြောင်းအတည်ပြုရန်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များတောင်းခံပါလိမ့်မည်။ ကျေနပ်လောက်သောအသက်အရွယ်အထောက်အထားကိုမပြ သ၍ အတည်ပြုပြီးသည်အထိငွေစာရင်းများကိုဆိုင်းငံ့ထားနိုင်သည်။
မိဘထိန်းချုပ်မှုများသည်သင်၏ကလေးကိုအွန်လိုင်းလုံခြုံရေးအတွက်အရေးကြီးသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ မိဘထိန်းချုပ်မှုများကိုကွန်ပျူတာများ၊ စမတ်ဖုန်းများ၊ တက်ဘလက်များနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းစနစ်များအပါအ ၀ င်အင်တာနက်ဖွင့်နိုင်သောကိရိယာများစွာတွင်ရရှိနိုင်သည်။ မိဘထိန်းချုပ်မှုများသည်သင့်ကလေးအားအွန်လိုင်းတွင်ရှိစဉ်မသင့်လျော်သောအကြောင်းအရာများနှင့်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည့်အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
Qustodio - အခမဲ့ဗားရှင်းသည်မိဘအုပ်ထိန်းမှုအပြည့်စုံဆုံးအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်သင့်အားစည်းကမ်းချက်များနှင့်အချိန်ဇယားများသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုကြည့်ပါ: www.qustodio.com